SoundHound အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
9.8.1.1 for Android
ဒေါင်းလုပ် APK（38.9MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် SoundHound - Music Discovery & Lyrics
ဟေ့၊ ဒီသီချင်းကဘာလဲ။ SoundHound သည်သင့်ပတ် ၀ န်းကျင်မှတေးဂီတကိုရှာဖွေရန်လွယ်ကူစေသည်။ သင်အိမ်တွင်၊ သင်၏ကားထဲတွင်သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုအရေးမကြီးပါ။ App ကိုဖွင့်ရုံ၊ လိမ္မော်ရောင်ခလုပ်ကြီးကိုနှိပ်ပါ။
ဂီတခရီးကိုသိမ်းဆည်းပါ။ သင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သောသီချင်းများနှင့်သီချင်းစာသားများအားလုံးကိုသင်၏ကိုယ်ပိုင်သမိုင်း၌သိမ်းဆည်းထားလိမ့်မည်။ သင်ချစ်မြတ်နိုးရသည့်ထိုသီချင်းကိုသင်မည်သည့်နေရာ၌ကြားခဲ့ရသည်ကိုကြည့်ရှုရန် Music Map တစ်ခုရှိလိမ့်မည်။ ။ သင်၏ Spotify အကောင့်ကိုဖွင့်စရာစာရင်းများတည်ဆောက်ရန်၊ အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးမှတေးဂီတကိုစူးစမ်းလေ့လာရန်၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီသီချင်းစာသားများရှာဖွေရန်နှင့်အားလုံးသောအချိန်နှင့်တပြေးညီသီချင်းများကိုရှာဖွေနိုင်သည်။ မကြာသေးမီကရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်ဂီတမျက်နှာသာ အတူတကွသီချင်းဆိုပါ, စကားလုံးအားလုံးကိုအလွတ်ကျက်ပါ, သင်ကာရာအိုကေမာစတာတက်အဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်။ အမျိုးမျိုးသောအမျိုးအစားများနှင့်အမျိုးအစားများအလိုက် SoundHound ဇယားထိပ်ဆုံးများမှသီချင်းစာသားများကိုလည်းစာသားများရှာဖွေနိုင်သည်။
- သီချင်းခေါင်းစဉ်၊ အနုပညာရှင်၊ အယ်လ်ဘမ်အပါအ ၀ င်သင့်ပတ် ၀ န်းကျင်၌တေးဂီတကိုရှာဖွေရန်လိမ္မော်ရောင်ခလုပ်ကြီးကိုနှိပ်ပါ။ , နှင့်စာသားများ။ ။ - သီချင်းတစ်ပုဒ်ကိုသင့်ခေါင်းပေါ်တွင်ကပ်ထားသလား။ ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ၊ သီချင်းဆိုပါသို့မဟုတ်တေးသွားပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားအရာများကိုပြုလုပ်ပါလိမ့်မည်။
- Genre, Global နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအပူဆုံးဂီတအသစ်များကိုစစ်ဆေးပါ။ လူကြိုက်အများဆုံးဇယားများ - ကျွန်ုပ်တို့အနီးအနားရှိကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဂီတမြေပုံနှင့်အတူဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာရှာဖွေပါ။
- သင်ရှာဖွေတွေ့ရှိသည့်သီချင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ built-in YouTube ဂီတဖွင့်စက်မှတဆင့်အခမဲ့ဖွင့်နိုင်သည်
- သင်၏ Spotify အကောင့်ကို SoundHound မှတိုက်ရိုက်စီးဆင်းရန်ချိတ်ဆက်ပါ။
- သင်၏ရှာဖွေတွေ့ရှိထားသောသီချင်းများကို Spotify ဖွင့်သည့်စာရင်းထဲသို့အလိုအလျောက်ပြောင်းပါ (SoundHound အကောင့်နှင့် Spotify မှာယူရန်လိုအပ်သည်)
- သင်၏ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်အားလုံးကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ပါ။ ကိရိယာများစွာ
- LiveLyrics®ဖြင့်အချိန်နှင့်တပြေးညီစာသားများကိုကြည့်ရှု။ အပြန်အလှန်ပြောဆိုခြင်း - စာသားများကိုရိုက်ထည့်ပါသို့မဟုတ်အသံရှာဖွေခြင်းကိုအသုံးပြုပါ။ ဒီလိုမျိုးပြောပါ - Hey SoundHound … Michael Jackson ရဲ့ Thriller အတွက်သီချင်းစာသားပြပါ။
- မကြာသေးမီကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သောသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောဂီတ၏စာသားများကိုရယူပါ။ - စာသားများကို SoundHound ဇယားထိပ်ဆုံးမှရှာဖွေပါ။
SoundHound ကို“ Hey SoundHound …” တပ်ဆင်ထားသည်။ ၎င်းသည်သင်၏အသံဖြင့်သာကစားခြင်းနှင့်တေးဂီတကိုအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သည့်မယုံနိုင်လောက်အောင်အစွမ်းထက်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ “ Hey SoundHound …” ကိုပြောပြီးအောက်ပါအတိုင်းတစ်ခုခုကိုဆက်လုပ်ပါ။
“ Castle on the Hill” သို့ကျွန်ုပ်စာသားကိုပြပါ။ ”“ ယနေ့ထိပ်တန်းသီချင်းများကိုဖွင့်ပါ” "ဒီသီချင်းကိုကျွန်ုပ်၏သီချင်းစာရင်းထဲသို့ထည့်ပါ" (Spotify only) -
မျှဝေပါ။ Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, messaging service နှင့် email မှတဆင့်သင်၏ဂီတရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များကိုမျှဝေပါ။
အကောင်းဆုံးသုံးသပ်ချက်များ - အကောင်းဆုံး Music Engagement App - BILLBOARD Music App ဆုပေးပွဲများ - - "Genius, မဟုတ်လား" - B.B.C. World Radio
- "ဒါကအံ့သြစရာကောင်းတယ်၊ ရူးသွပ်ခြင်း?" - David Pogue
အလံကြော်ငြာများကိုမလိုချင်ပါသလား? SoundHound∞သို့အဆင့်မြှင့်ပါ။ https://04ii.app.link/RXaRXypntA
တောင်းဆိုထားသောခွင့်ပြုချက်များ၏ရှင်းလင်းချက် - https://bnc.lt/Scoe/D66l9PB34B
ဘာအသစ်လဲ SoundHound - Music Discovery & Lyrics 9.8.1.1
No may open sry